सबैको माग नै समवृद्ध नेपालको पहिचान हो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:५३ English
सबैको माग नै समवृद्ध नेपालको पहिचान हो
भीम रावल, नेता एमाले
० तपाईं खुशीकि बेखुशी हुनुहुन्छ ?
– शान्ति निर्माणमा भएका प्रगतिहरु बेखुशी हुने प्रश्नै भएन ।
० धेरै खुशी हुनुहुन्छ ?
– धेरै र थोरैका कुरा भएन । यी कुरा राम्रा हुन् । तर संविधान घोषणापछि हुने खुशी अहिले आइसकेको छैन ।
० हिजोको विशेष समितिले के निर्णय ग¥र्यो ?
– छनोट समितिका अध्यक्ष लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग परामर्श ग¥र्यौ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा अगाडि बढोस् हामीले भन्यौं । छनोट प्रकृया अगाडि बढाउँदा नेपाली सेनाको के सुझाव छ भनेर हामीले सोध्यौं । नेपाली सेनाको तर्पmबाट आवश्यक दरबन्दी दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छलफल भयो । महानिर्देशनालयमा जति संख्या होला भनेर अनुमान गरिएको थियो, त्यो नहुने स्थिति भइसकेको छ । अब त्यो महानिर्देशनालयका बारेमा के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्नेछ । यस विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा विशेष समितिले के निर्णय गरेको छ भने, जब माओवादी लडाकूको समायोजनामा जाने अन्तिम संख्या निर्धारण हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामीले महानिर्देशनालयको नेतृत्व र संख्या तय गर्नेछौं भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।
० कहिलेसम्म तय होला ?
– सम्भवतः आजसम्म स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकूको प्रकृया सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न भइसकेपछि छनोट समितिले छनोटको आवश्यक तयारी गर्छ । त्यही समायोजनमा जाने लडाकूहरु नेपाली सेनाको छनोट प्रकृयामा प्रवेश गर्छन्, प्रवेश गरिसकेपछि यदि कुनै कुनै व्यक्ति फेरि पनि छनोटमा परेनन भने उनीहरुलाई हामीहरुले स्वेच्छिक अवकास र पुनस्र्थापनाको विकल्प दिएकै छौं । र, अन्तिम प्रकृयाबाट जुन संख्या कायम हुन्छ, त्यसपछि मात्र हामी त्यो अन्तिम संख्या भनेर भन्न सक्छौं ।
० प्रधानसेनापतिले के भन्नुभयो ?
– दरबन्दीका कुराहरु स्पष्ट भयो भने सजिलो हुन्छ भन्नुभयो । दरबन्दीका कुरा हामीले पहिला नै छलफल गरिसकेका छौं । यसका साथसाथै हाम्रो उद्देश्य के छ भने नेपाली सेनाको संख्या बढाएर लैजानुभन्दा यदि नेपाली सेनाभित्र दरबन्दी खाली छन् भने त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यदि त्यो दरबन्दीले पुग्दैन भने माओवादी लडाकूको अन्तिम संख्या जुन कायम हुन्छ, सोअनुरुप हामीले दरबन्दीका लागि प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
० लडाकूलाई कहिलदेखि सैनिक ऐन आकर्षित हुने हो त्यो पनि टुंगो गरिदिनुहोस् भनेर प्रधानसेनापतिले भन्नुभएको छ ?
– यसमा कुनै समस्या छैन । सामान्य रुपमा सबैले बुभ्mने कुरा छ, जुन दिन माओवादी लडाकूहरु नेपाली सेनामा विधिवत तालिममा प्रवेश गर्छन्, सोही दिनदेखि निजहरुलाई नेपाली सेना ऐन आकर्षिक हुने कुरा सामान्य मान्छेले बुझने कुरा हो ।
० समायोजन हुने लडाकूको संख्या घट्दै गएको हो ?
– हामीले छलफल गरेर माओवादी लडाकूहरुलाई स्वेच्छिक अवकास, पुनस्र्थापना र समायोजनको विकल्प स्पष्टरुपमा दिइसकेपछि कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुराको निधो गर्ने, त्यसलाई छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लडाकूहरुको हो नि । अब लडाकूहरुले स्वेच्छिक अवकास छान्छन भने त्यसमा हामीले यस्तो उस्तो भनेर टिप्पणी गर्ने आवश्यकता छैन ।
० नेपाली सेनामा मापदण्ड नपुग्ने भएर समायोजन नरोजेका हुन कि ?
– हामीले त्यसरी अर्थ लगाउन मिल्दैन । त्यो माओवादी लडाकूहरुको स्वविवेकको कुरा हो । कुन व्यक्तिले कस्तो जीवन व्यतित गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा उसको स्वविवेकको कुरा हो ।
० यो विषय कहिलेसम्म टुगिएला ?
– हामीले हिजै नै विशेष समितिमा छनोट समितिका अध्यक्षसँग परामर्श गरिसकेका छौं । छनोट समितिले प्रकृया तुरुन्तै अगाडि बढाउने कुरा गरिसकेको छ । यो कुरा रोकिने भएन, छिटै अगाडि जान्छ । शिविर खाली हुने र माओवादी लडाकू भन्ने शब्दावली नरहने अवस्था एकदमै छिटै हुन्छ ।
० हात्तीवनमा के सहमति भयो ?
– निक्कै लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएका शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारजस्ता विषयमा गहन छलफल ग¥यौं । विषय केन्द्रित भएर छलफल भयो । पहिला पहिला अरुतिर कुरा जाने भएन ।
० जातीय राज्य चाहिन्छ भनेर आदिवासी, जनजातिहरु सडकमा आइसके नि ?
– त्यो उहाँहरुको माग हो । त्यो माग पनि उहाँहरुको आप्mनो अधिकार पहिचान र प्रगतिको लागि माग हो । त्यसलाई अन्यथा लिइरनुपर्ने केही छैन । ती सबै मागहरु नै समृद्धि नेपालको पहिचान हो । विविधतामा एकता कायम नगरी देश अगाडि जाँदैन ।
६ बैशाख २०६९, बुधबार १६:२१ मा प्रकाशित